people Nepal » १० गते आउने कांग्रेसको घोषणापत्र के–के छ ? १० गते आउने कांग्रेसको घोषणापत्र के–के छ ? – people Nepal
१० गते आउने कांग्रेसको घोषणापत्र के–के छ ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी तीन वर्षभित्र १० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजना र कार्यक्रमसहित स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र तयार पारेको छ । महेश आचार्य नेतृत्वको घोषणापत्र मस्यौदा समितिले घोषणपत्र तयार पारेको हो ।
कांग्रेसले घोषणापत्र वैशाख १० मा सार्वजनिक गर्दैछ । जलशक्ति र जनशक्तिलाई आर्थिक संमृद्धि हशासिल गर्ने मुख्य आधार ठान्दै कांग्रेसले कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई जोड दिएको छ । उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण तथा स्थानीय तहबाटै लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिएको छ ।
‘तीन वर्षभित्र १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सहित ‘रोजगारी सिर्जना, गाउँ तहमै उद्योग व्यवसायका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम, कृषि जडिबुटी, पर्यटन र जलस्रोतमा जनशक्ति परिचालनको योजना, शैक्षिक बेरोजगारलाई हरेक क्षेत्रमा सहुलियत दिने कार्यक्रम उनीहरुमार्फत समृद्धिको खाका निर्माण घोषणापत्रका प्राथमिकमा रहेकाे छ ।